Hebei Besttone Fashion Co., Ltd.natsangana tamin'ny taona 2005, dia orinasa mpivarotra matihanina sy feno manambatra fikarohana sy fampandrosoana teknika, fitafiana PU, akanjo lamba, fitafiana ary fanamboarana entana ivelany. Ny orinasa dia manana ekipa mpamorona sy famokarana tena tsara mba hiantohana ny fampidirana akaiky ny fikarohana ka hatramin'ny famokarana.
Besttone dia natokana tamin'ny sehatry ny appreal nandritra ny 20 taona, ary nametraka rafi-pitaterana tonga lafatra, mampifangaro sy manompo mpanjifa malaza. Ny vokatra dia aondrana any Eropa / Azia sy Afrika ary firenena hafa. Izy io dia nanjary orinasa fanondranana matihanina, manavao ary mifantoka amin'ny serivisy, izay nahazo ny fiderana niarahan'ny mpanjifa fanta-daza maro tany Eropa sy Etazonia, ary nahazo soa fatratra ho an'ny orinasa.
Taorian'ny fifandonana ny herin'ny haitao sy ny haitao dia natsangana ny orinasa iray Besttone ary napetraka tamin'ny famokarana tamin'ny taona 2017. Ity orinasa ity dia miorina ao amin'ny tanàna nahaterahan'ny tale jeneraly anay ka mora tantana. Izy io dia manana mpiasa maherin'ny 500, ary andiam-pamokarana mandroso 15. Ny masinina rehetra amin'ny tsipika famokarana dia novidina avy amin'ny orinasa lehibe matihanina, ary nolalovan'ny fitsapana iraisam-pirenena momba ny fiarovana sy ny kalitao. Izy io koa dia manana atrikasa famokarana tsy miankina marobe, toy ny fanaovana lamina, fanapahana, zaitra, famitana, fanaraha-maso kalitao ary famonosana, mba hahafahan'ny orinasa mamokatra mahaleo tena sy mitantana tsy miankina. Ny mpiasa rehetra amin'ny tsipika famokarana dia ampiofanin'ny fahaizan'ny vokatra sy ny fiarovana hahatratrarana ny tanjon'ny serivisy famokarana. Ireo rehetra ireo dia afaka miantoka be ny vokatra avo lenta sy ny fotoana fandefasana haingana. Ny orinasa dia mampiasa ny rafi-pitantanana fampisehoana. Fotoana mitovy amin'ny fotoana hentitra ary mampifangaro ny fandaminana manomboka amin'ny fividianana, famokarana ka hatramin'ny fonosana ary fitaterana amin'ny orinasa Besttone mihitsy. Ny orinasa koa dia nanangana ny rafitry ny serivisy serivisy tsara indrindra amin'ny mpamatsy sy ny fitaterana.
Taorian'ny fanangonana tanjaka nandritra ny taona maro, tamin'ny fampidirana loharanon-karena avo lenta maro, ankehitriny, Besttone dia niditra am-pomba ofisialy vaovao - famokarana vokatra fiarovana any ivelany. Ny famokarana ao anatin'izany ny fitafiana ivelany th entan'ny hafanana sy ny antsipiriany ety ivelany, toy ny fonon-tànana, scarf, kneepad, fehin-tànana, fehin-kiho, saron-tava, saron-tava, kitapom-batsy, kitapo valahana, kitapo tanana, satroka mafana, kitapo fatoriana, mosara ary sns. karazana famokarana fiarovana ivelany. Ny famokarana rehetra dia afaka mifanaraka amin'ny fanamarinana fenitra iraisam-pirenena.
Miorina amin'ny vokatra avo lenta ary tarihin'ny filan'ny mpanjifa, Besttone dia lasa orinasa mpamokatra maro samihafa manambatra akanjo / akanjo / vokatra ivelany. "Ny kalitao hentitra ho toy ny fototra, ny fangatahan'ny mpanjifa ho mpitari-dalana, ny serivisy avo lenta ho tanjona" Izany no fanambarana tsy miovaova momba ny orinasa Besttone ary ny mpiasa Besttone rehetra dia tsy maintsy manaraka. Mino aho fa tsy ho ela dia ho kintana mamirapiratra mamirapiratra eran'izao tontolo izao i Hebei Besttone fashion Co., Ltd.